ချစ်ပုံပြင်: August 2008
ကောင်းကင်အနက် နောက်ခံကတိမ်စင်လမင်း..သူလည်း ကျမလိုဘဲ..တကိုယ်ထဲပျင်းနေ..ည၏ ညီမ စန္ဒာ..သူရိန်နေမင်းကို..လွမ်းလျှစွာ..သိပ်လှပတဲ့ လပြည့်ညတွေမှာမောင် ဘာတွေလုပ်နေပါလိမ့်။လွမ်းနေမှာလား..ဖုံးခေါ်မလား..ဒို့ တတွေ ဝေးနေချိန်။လရောင်ခြည်ဖြန်းတဲ့ညတိုင်း.လမင်းကို ကြည့်ရင်း.တမ်းတမ်းတလွမ်းရသည်..သူ့ ကို..သတိရသည်..သူ့ ကို။ပွင့်လင်းရိုးသားစွာတွယ်တာတဲ့ နှောင်ကြိုး..တရစ်ရစ်တိုး.တသက်စာရွယ်ကိုး..ပြည့်လမင်းရေ..ခလေးဘဝ ကလို..“ထမင်းဆီဆမ်း..ရွှေလင်ဘန်းပေးပါ။ဝါ..ဝါ..ဝါ..”ပူဆာ..မတောင်းလိုပါဘူး..သူနဲ့ တစ်ကြိမ်တစ်ခါဘဲ ဖြစ်ဖြစ်..တွေ့ ဆုံ ကြုံတွေ့ ခွင့်ရင်ဆာမောဟိုက်.. မျှော်တလင့်လင့်လိုချင်မိတာ…တခဏလေးဘဲချစ်ခွင့်။မ (၈။၃၁။၂၀၀၈)
နောင်လာမဲ့ နှစ်..၃၀ မှာ..ကျမ တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝ ..ပန်းနွမ်းတွေလို..ကြွေကျသွားမှာပါ။မြေမှုန့်က..စတဲ့ဘဝမြေမှုန်ကိုဘဲ ပြန်ဖြစ်မြေဆီလွှာထဲပျော်ဝင်မဲ့..ကျမတို့ အရိုးတွေ.ဒါ..မမြဲတဲ့..သဘာဝလေ။ကျမ..နဲ့မောင်..ဘယ်သူ..အရင် သွားမလည်း..ဘယ်သူမှ မသိကြပါဘူး..ဘယ်ဗေဒင်ဆရာမှလည်း မပြောနိုင်ပါဘူး။သေချာတာ တခုဘဲရှိတယ်။ကျန်ရစ်သူကတော့ ခံစားရမယ်။ကျမ တို့ နှစ်ယောက် သိပ်ချစ်တယ်။ကျမရဲ့ဘဝ..ဖယောင်းတိုင်မီးစလို..ရုတ်ခြည်း ငြိမ်းခဲ့ရင်..မောင့်ကို..အနားမှာရှိ..လက်ကလေးကို..ကိုင်ကြည့်ချင်ပေမဲ့..သူ့ ရဲ့ စိုစွတ်တဲ့မျက်လုံးတွေ..ကျမ မကြည့်ရဲပါဘူး..ကြေကွဲနေမဲ့ မျက်နှာ..သူရဲ့ ခံစားလွန်ဝေဒနာ.ကျမ မပေးရက်ပါဘူးမောင်။တကယ်လို့ကျမ အရင်သွားရင်..သူ့ ကို..ကျမ အကြောင်း..သူငယ်ချင်းများရယ်..သတင်းမပေးကြပါနဲ့ ။လေပြည်တွေထဲ ချက်ခြင်းပျောက်..စိမ်းကားတတ်သူတယောက်သူ့ ကို ခြေရာဖျောက်သူ..မိန်းမရိုင်းလို့ကျမကို သူ..မြင်သွားပါစေ..ထင်သွားပါစေ..ကိစ္စ မရှိပါဘူး။သူ့ အချစ်ကို ကျမ ရသလိုသူ့ အမုန်းကို ယူသွားရဲတယ်။စိတ်နာ..သူ မုန်းပါစေ။မုန်းတာက..ဆုံးရှုံးတာထက်..မနာကြင် လောက်ပါဘူး။အချိန်တွေကြာ..သူသက်သာလာမှာဘဲ။သူရင်ထဲ..ကျမအတွက်မဆွေးမြေ့စေချင်ဘူး..ကျမ သူ့ ကို ချစ်တယ်။တကယ်လို့ ..သူအရင်..သွားမယ်ဆို..သူ့ နောက်ဆုံးရက်များ..အနားမှာ..ကျမ.နေပါရစေ။ခန္ဓာ နာကျင်..သူ့ စိတ်ညိုညင်..ဟောက်ချင်ဟောက်..ကျမမကြောက်ပါဘူး။အေးစက်စပြု သူ့ လက်..ကျမ ဆုတ်ကိုင် နွေးထွေးပေးပါရစေ။တိုးညှင်းစ..ထွက်သက်..ကျမ..ဘုရားစာရွတ်ပေးပါရစေ။ခြောက်နေစ..ဆံနွယ်တွေ သပ်..ကျမ အသံတွေ..မတုန်ရီအောင်..ဟန်ဆောင်တတ်မှာပါ။စိုနေမဲ့မျက်ဝန်း..မျက်ရည်ကို မကျအောင်အံခဲ သိမ်းတတ်မှာပါ။သူရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေ အတွက်..ကျမ အဆင်သင့်ရှိနေတယ်..ကျမ ..သူ့ ကို..ရင်နင့်အောင်ချစ်တယ်။.မ (၈။၃၁။၂၀၀၈)
အတွင်းဆွေးမြေ့ ရင်၏ အလွမ်း.
အမှန်တိုင်း ပြောချင်တယ် ...နားထောင်ပေးမလား..မျက်စိလေး ခဏလောက်မှိတ်တိတ်တိတ်ကလေး..နားထောင်..ရိုးရိုးစင်းစင်း..ပြောလိုက်မယ်.အမြဲတမ်း..မောင့်ကိုချစ်တယ်။.မလိမ်တမ်း ပြောချင်တယ် ...ယုံကြည်ပေးမလား..မျက်စိလေး ခဏလောက်မှိတ်တိတ်တိတ်ကလေး..နားထောင်..တိုးတိုးကလေး..ပြောလိုက်မယ်.အချိန်တိုင်း မောင့်ကိုလွမ်းနေတယ်။.တနေ့ တနေ့ ..မနက်က..ည..ညကနေ မနက်..ဘယ်ဘဲသွားသွား..ဘာဘဲလုပ်လုပ်..အချိန်တိုင်းဘဲ မင်းအကြောင်း..အတွေးတိုင်းဘဲ..မင်းအကြောင်း..တမ်းတ ရတဲ့နေ့ တွေ...အိပ်ရေး ပျက်ခဲ့တဲ့ညတွေဖမ်းစား အဆိပ်တက်ကလူ.နှိပ်စက်ဘယ်တော့လည်း နီးမဲ့ရက်..မျှော်လင့်ရက်များ..တဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေ..ရာသီတွေပြောင်း..နွှေမိုးဆောင်း..အော်..ပိုချစ်သူသာ..ခံစားရမြဲမလွမ်း..ဘယ်သူနေ..ကျမရင်ထဲမှာ..ခုထိ..ဆယ်နွေ..မ (၈။၃၁။၂၀၀၈)
အလင်းခြည် ပျောက်ခဲ့တဲ့..အမှောင် လှိုင်ဂူတွင်းက ည..ချောက် အိမ်မက်ဆိုးတွေကြား..စမ်းတဝါး..ညလမ်းလျှောက်သူ..အဝေးရိပ်က..ထွက်ပေါက်..အလင်းရောင် ..အောက်မှာ..မင်းကို.ငါတွေ့ တယ်..နှင်းဆီဖူး..တခက်..ဘဝအတွက်..သေရည်တခွက်.ငါ့ အတွက်တော့ ..မနက်ဖြန်..မင်းအတွက်..ရှင်သန်ချင်တယ်။မျှော်လင့်ချက် လှေအိုကိုတက်မပါလည်း..ငါဆက်လက်..ဖက်တွယ်ထားဆဲ။ရှင်သန်လာမဲ့ ဝိညာဉ်အမဲကိုအဖြူရောင် ကြိုးစားချွတ်နေမြဲ။နာကျင်မှု..ဒဏ်ရာတွေ..ဖန်ရေဆေး..သန့် စင်ခဲ့..မင်းရဲ့..ကြင်နာယှက် လက်မောင်းတွေကြားလှပတဲ့ ခရမ်းပြာအိမ်မက်..ငါတက်မက်စွာ..ဆက်မက်ချင်ရဲ့..အချစ်ရှုံးခဲ့တဲ့ငါ..ပစ်စလက်ခတ်..ဖုံတက်နေသော နှလုံးသား..သေဆုံးခဲ့သော..အချစ်များ..မင်းနဲ့ကျမှ..ပြန်ရှင်..မှော်ဆရာ မန်းမှုတ်ခဲ့လို့ အသက်ပြန်ဝင်ငါ့ဘဝတဖန်..လန်းဆမ်းခဲ့ရ..ကန္တာလမ်းက..သစ်ခြောက်တစ်ပင်။မ (၈။၂၁။၂၀၀၈)
Ancient Roman lovers, locked in an embrace for 6,000 yearsFOREVER Author: Megan K. Forever takes me byaminute,While I&#8217;m here with you.I&#8217;m falling even more in love,With everything you do.Hold me in your arms,Look deep into my eyes,Don&#8217;t turn away and let me go,Don&#8217;t ever tell me lies.I swear I&#8217;ll never loose you,In my arms I&#8217;ll always hold.I&#8217;ll never let you slip away,And leave nothing left untold.There aren&#8217;t enough hours,In each passing day,To find all the words,I wish I could say.Your kiss will last forever,Your touch forever warm.You&#8217;ll guide me to the sunlight,And shield me from the storm.This is what I&#8217;m saying,With everything that&#8217;s true,I swear on my life,That I really do love you.
တိုးတိုးကလေးသက်ပြင်းချသံအာဖရိကန် ဗုံသံတွေနဲ့ နတ်ဝင်ပူးနေတဲ့ ရင်ခုန်သံ.မပွင့်တပွင့် စကား..ချစ်သလား သူမေးတဲ့အခါ..လှိုက်ဖိုသိမ့်သိမ့်..အနမ်းနဲ့သိပ်တဲ့အခါ..ည အမှောင်ရယ်..လင်းရောင်လက် ကြယ်တွေကြား..လေအလာ မွေးပျံစပ္ပါယ်ပန်းနံ့ တွေကြား..အသံနဲ့ကဗျာ..ကြင်နာတဲ့ သံစဉ်ကြားမှာသူလေ ပဉ္စလက် မျက်လှည့်ပြခိုက်ကိုယ်..အိပ်မွေ့ ချခံထိလိုက်တယ်။သူကတော်တာလား..ကိုယ်က " အ" တာလား..မ (၈။၃၀။၂၀၀၈)
နှင်းဆီပွင့်ချပ်များ အပေါ်မှာ သတိလက်လွတ်
မျက်နှာလေးတစ်ခုက..အဖြူအမဲ အိမ်မက်..ညည မက်တဲ့အခါ..သိလိုက်တယ်.အချစ်ရဲ့ဖမ်းစားမှူအောက်..ကိုယ်တ်ိမ်းပါးခဲ့ပြီ။“မ” လို့ခေါ်တဲ့အသံလေးတစ်ခုက..ပျားရည်လေးလို နားဝမှာချိုကနဲ ဆင်းသွားတဲ့အခါ..သိလိုက်တယ်.အချစ်ရဲ့ ပင့်ကူမျှင်ထဲကိုယ် ငြိသွားခဲ့ပြီ။သတိနဲ့ ချပ်.သမာဓိနဲ့ ..အချစ်ကို သတ်ခဲ့လည်း.တည်ငြိမ်စ..ကန်ရေပြင်ရဲ့နားထင်အစပ်ကိုအမှတ်မထင်လာ နမ်းလိုက်တဲ့..လေညှင်းရဲ့..ကဝေနှုတ်ခမ်းတွေကြားမူးမိုက်စွာ လဲကျသွားတယ်.နှင်းဆီပွင့်ချပ်များရဲ့ အလယ်။မ (၈။၃၀။၂၀၀၈)
ကျီစယ်သလားကွဲ့ .. မြှားနတ်မောင်
မြှားနတ်မောင်ကလေးကဘဲ..တပျော်တပါး ဂျွမ်းထိုး..ဘယ်သူဘဲထိထိ ပစ်လိုက်မိသလား..တမင်သက်သက် ရည်ရွယ်ဖူးစာမှန်လို့ ဘဲပစ်သလား..ထိချင်ထိထိ..မထိလည်းထိ..ပစ်သည့် အဆိပ်လူးမြှား.ထုတ်ချင်းပေါက်တဲ့ နှလုံးသားအသွင် မတူ..ဘဝ မတူတဲ့ သူ နှစ်ယောက်..အချစ်ကြောင့် မှောက်ရက်လဲပြီ။ဆေးကုသ..ခက်လွန်းသည်။.သူမှ သူဘဲ..စွဲ..ကိုယ်မှ ကိုယ်ဘဲ စွဲ..ရီစရာ ဟာသ တပုဒ်လားအချစ်ပုံပြင်လွမ်း တပုဒ်လား။ကြေကွဲရင်လည်း ..ရက်စက်ဝေခွဲမရ..အိမ်မက်...အချစ်နဲ့ တွေ့လူတွေဟာ မျက်ကန်းသက်သက်ဓါးသွားပေါ်က ပျားရည်စက်လိုချင်တက်မက်..တူတူ ရက်တဒင်္ဂ အတွက်ဘဲ..ရှင်မဲ့အသက်။ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ မနက်ဖြန်..မသိတာ အမှန်ပေမဲ့လက်ရှိရဲ့ ပစ္စုပ္ပန် ကာလ..ပန်းမွေ့ ယာပေါ်လွန့် လူးမသေခင်..ပန်းသီးလေးတော့ ခူးပါရစေ။မ (၈။၂၈။၂၀၀၈)
တစ်ခါတစ်ခါ..ကျီစားနောက်ပြောင်..မှားခဲ့ရင်..စိတ်ညိုညင်..ပြန်ခေါ်ပါ့မလား…ဟင်..တစ်ခါတစ်ခါ..အမြင်မှားသံသယ..များခဲ့ရင်..စိတ်တိုလျှင်..ကြည်ဖြူပါ့မလား..ဟင်..တစ်ခါတစ်ခါ..လင်နဲ့ မယားလျှာနဲ့သွားကတောက်ကဆများပြန်ချစ်ပါ့မလား..ဟင်..မတူညီတဲ့လူသား..ယုံကြည်တာကိုင်စွဲ..အမြင်တွေ..ဆွေးနွေးရင်နားလည်ပါ့မလား..ဟင်..တခါတရံ..ဒို့ နှစ်ယောက်..အဖုအထစ်..ရန်တွေ..ဖြစ်ကြမှာဘဲရန်ဖြစ်ရင် နှုတ်ခမ်းဆူခြေဆောင့်..စိတ်ကောက်ကြမှာဘဲအပြောလွဲ.. စိတ်ဆိုးကြမှာဘဲအတင်လွဲ.. ညိုညင်ကြမှာဘဲ။ဒါက ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။တခြမ်းစီစ..တဘဝ..မောင်နဲ့ကျမ.မှာ..မောင်မရှိ..စိတ်ညစ်..ကျမ မရှိ..မောင်လွမ်းရစ်..စိတ်တွေတို..အလိုမကျလည်းသဝန်တွေတို..သံသယနဲ့ ကြည့်လည်းအပြစ်ဆို.. ..မျက်နှာညိုကြလည်း..ရိုးသားအမှန်မြင်..ပွင့်လင်းဆိုကြညှိနှိုင်းကြမည်။မှားသူတောင်းပန်..မှန်သူ အနိူင်မယူရန်.."ဆောရီး" ဆိုပြီး..ပြုံးဖြီးဖြီးသာဆို..ရန်ဖြစ်ပြီးရင်..ပြန်ချစ်တတ်ဖို့ ဘဲလို။မ (၈.၂၈.၂၀၀၈)
ရေအလာ..မြောင်းမပေးတတ်ပေမဲ့သူ့့မြင်တယ်.ကျမရဲ့..သံယောဇဉ်ကြိုးမျှင်လေးတွေ..လူကြီးလို…ဟန်လုပ်ရပေမဲ့ကျမမြင်တယ်..သူ့ ရဲ့ အကြင်နာပွင့်တွေ..ရိုးရိုးပုံပြင်..ချစ်ခဲ့ကြပေမဲ့ဆန်းပြားခဲ့ ဂန္ဓ၀င်..တစ်နေ့ ထက်တစ်နေ့ ပိုချစ်မိတာ..သစ်ပင်မြစ်လို..ခိုင်မြဲထု..တည်ဆောက်မဲ့အခြေ..လန်းဆန်းဝေဖြာ.မျှော်လင့်ချက်သစ်ရွက်..ရှင်သနဖူးငုံပန်းလို..မေတ္တာများ.. ပွင့်ချပ်ဝေသီနေခြည်လို သွန်းလောင်းတဲ့.ရဲရင့်မှုတွေ..ကြိမ်နွယ်မျှင်..တွယ်ရှက်ဖြတ်မရ..ဒီသံယောဇဉ်မယုံကြည်နိူင်အောင်..ဒို့ နှစ်ဦးသား ပြောင်းလဲခဲ့ပြီ..်အချစ်ဆိုတဲ့..စီးဆင်းခဲ့..ပျားရည်မြစ်ချို..အားအင်သစ်တဖန်..နိူးထရှင်သန်.ဘဝ၏..သစ်ပင်ပျို.မောင်နဲ့သာဆို..ကျမ..ပြန်တည်ဆောက်လို။မ (၈။၈။၂၀၀၈)
ငယ်ငယ် ကလေးဘ၀..လမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်လဲကျ..ငိုပြခဲ့ရင်..ကြင်နာစွာ..အားပေးသင်ပြ..ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ပြန်ထဥုံဖွ..ဥုံဖွ..ကြီးလာတဲ့အခါ..ရင်ဆိုင်ကြုံရ..ဘဝက မုန်တိုင်းစ..တယောက်ထည်းလှိုင်းလုံးများပေါ်မြုပ်လိုက် ပေါ်စအားမငယ်နဲ့ နော်..ဒါဟာလေ ဘဝ။တွဲလက်ခိုင်ခိုင်..မပျက်တမ်း..ဆက်ချစ်ကြ.အဖေါ်ကောင်းသာ..တသက်ထာဝရ..ကျမ..ဆိုမယ်မောင်.လဲကျခဲ့ တဲ့ အခါ..နောက်ဖက်မှာ..ကျမ ရှိတယ်..အားတင်းကာ..ထပ်ကြိုးစားနော်မောင်..ဥုံဖွ..ဥုံဖွ..မ (၈။၂၈။၂၀၀၈)
နေမင်းနဲ့ လမင်း..မနက်က..ည..မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းက..စ.မိုးကုတ်စက်ဝိုင်း မှာဆုံးလိုက်တမ်းပြေးတမ်း ကစားရင်း..တစ်ရက်ပြီး တစ်ရက်..သစ်ရွက်လို.ကြွေ.ခြစားနေဆဲ လွမ်းရက်များ.အော်..အသဲနှလုံးကို သဖန်းပင်ပေါ်သာ..ထားခဲ့ချင်ရဲ့လွမ်းဝေဒနာ..ရင်၌ မဆံ့ခဲ့။ရင်ခုန်သံတွေနဲ့ ကြည်နှုးပင်လယ်မြူးတဲ့ ညနေ..ကုန်သည်လေတွေ တိုက်တဲ့ အခါ..ကျမကို ..ဆောင်ယူသွားမလား..ချစ်သူရှိရာသွားဖို့ ရာ..လှေကြုံစီး..လိုက်ခွင့်ပေးပါ။လူလောကထဲ..မွေးဖွား ကြီးပြင်းတဲ့ လူအချင်းချင်း..ဘာလို့ များ..ကြမ္မာက ညှင်း..တခြားသူတွေ..ရယ်မောသံတွေ ချိုလွင်နေဆဲကျမတို့ ကံနည်း..… ငိုကြွေး ရှိုက်နေကြဆဲဒီနေ့ လည်းလေ..နေ၀န်းက..တူတူသွားပုန်း..လမင်းလုံးကြီးက..ထွက်..တူတူနေရမဲ့ တရက်ရယ်..ဘဝထဲက အနှုတ်..ဇီဝိန်ချုပ် ခဲ့ပြန်ပြီ။ကျန်နေသေးတဲ့..ရှင်သန်ဆဲဘဝရဲ့ သက်တမ်းရက်များ..ဘယ်လိုများ ဆွဲဆန့် ရမလဲ..ချစ်သူအနား..နေဖို့ ရာ။အဖြေမရှိတဲ့ ပုစ္ဆာ။မ (၈။၂၈။၂၀၀၈) Posted by
သီချင်းများနဲ့အိပ်စက်ခြင်း
ညထွက် ဌက်တွေ..ကောင်းကင်ပေါ်ကအော်သန်းခေါင်ကျော်သော်လည်း..နာရီသံ တချက်ချက်သက်ပြင်းချ..ရှိုက်သက်အိပ်မရ..ဒီတစ်ညလည်း.ကျမ..တစ်ယောက်ထည်းဘဲ မောင်။လမင်းက ငုံကြည့်လှောင်နေသည့် အလား.လရောင်ဖြန်းပက်တဲ့..ကျမအိပ်ရာမင်းနေရာက လပ်နေဆဲမင်းကိုယ်ငွေ့ မဲ့အေးစက်နေခဲ့လွန့် လူး အိပ်မရ..မျှော်လင့်သမျှ စိတ္တဇ..ရင်ခွင်မှာ..လေပွေဝဲတဲ့ည။ကဗျာ တပိုင်းတစ်စ..ကာရံ မညီ့တညီ..ရင်ကွဲအချစ်သီချင်းလေးတွေ.ဖွင့်နားထောင်နေဆဲဒီလိုဘဲ အဆုံးသတ်ခဲ့ရ..မိုးလင်းခဲ့ ရက်များစွာကိုယ့်ဘဝ…သံစဉ်လေးတွေနဲ့ဘဲ..အိပ်စက်ရတယ်။သိပ်လွမ်းတယ်..ငယ်။မ (၈။၂၇။၂၀၀၈)
စက္ကန့် တန်ကလေးများရယ်..ရပ်ပေးကြမလား.ချစ်သူရင်ခွင်ကြားက အချိန်။စက္ကန့် တန်ကလေးများရယ်..မြန်ပေးကြမလား.ချစ်သူ..အဝေးသွားတဲ့ အချိန်။စက္ကန့် ခြောက်ဆယ်…တစ်မိနစ်..မိနစ်ခြောက်ဆယ်…တစ်နာရီပေမဲ့ ချစ်သူနဲ့ တွေ့ ရတဲ့ ရက်.ခဏကလေးဘဲ..ကြွေသက်.မြန်ဆန်လွန်းလှတဲ့..နာရီ..ချစ်သူနဲ့ တူတူ မနေနိူင်သေးတဲ့ သမယအချိန်တွေက ကုန်ခဲလွန်းစွ..တစ်ရက်တစ်ရက်..ဖြေးဆေးစွာ..နေ၀င်နေထွက်မျက်နှာလိုက်လွန်းတဲ့ နာရီ..မြန်လိုက်နှေးလိုက်နဲ့ သူ ပလီ..စက္ကန့် တန်ရယ်..ရက်စက်လွန်းသည်..ဒီမှာဖြင့်..လွမ်းလှုပြီ။မ (၈။၂၇။၂၀၀၈)
သောင်ပြင်ပေါ်ချန်ခဲ့တဲ့ ခြေရာတွေဒီရေတက်ရင်.ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သလိုဒို့ ပါးပြင်ပေါ် နမ်းခဲ့တဲ့ အနမ်းတွေအဝေးရောက်တဲ့အခါ.. မောပမ်းသွားမယ်လားရေပြင်ပေါ် ထန်ခဲ့တဲ့ လှိုင်းလေ..အချိန်တန်ခဲ့ရင်..ပျက်ပြယ် သွားခဲ့သလို.ဒို့ နားဝမှာ ကြားခဲ့တဲ့ စကားတွေ.လေပြေသွေးတဲ့အခါ.အေးစက်သွားမယ်လားတိမ်စိုင်ပေါ် လျှပ်စီးနဲ့ မိုးလေ..ကြွေကျမိုးရေ..ပျောက်ကွယ်သွားတတ်သလိုဒို့ အသည်းပြင်ပေါ် စိုက်ခဲ့တဲ့ ပန်းတွေ..တနေ့ နေ တစ်ချိန်ချိန်..ပွင့်ခွင့်ရပါ့မလား။ခွဲမသွားနဲ့ နော်..အမြဲ ချစ်တယ်။ပူပန်စွာ…စိုးထိတ်တဲ့ဘဝင်လိုချင်တဲ့ .အဖြေ..မင်းလည်းသိတယ်။ကြားပါရစေ..မင်းဘယ်ထိ ချစ်တယ်။မ(၈။၂၅။၂၀၀၈)
သစ်ရွက်တို့နီကျင်..ကြွေနေခဲ့ရင်..မြေပြင်ဟာ..လက်ကမ်းဖွင့် ကြိုတယ်.။မိုးစက်တို့ ဖြူစင်စွေနေခဲ့ရင် သစ်ရွက်ဟာ..အနမ်းပွင့်နဲ့ကြိုတယ်.။အနောက် သို့နေ၀င်နေခြည်စ ရွှေစင်..ပင်လယ်မှာ..ရေဆင်းသောက် ညနေ..လွမ်းမှ လွမ်းလေ။အချစ်ရေ..မှီခိုမဲ့ ရင်ခွင်..ဝေဒနာနဲ့့ငြမ်းဆင်။မရှိခဲ့ပါ..သူလေ. အဝေးဆီ..ဖေါ်ကွဲဌက်…အဆွေးသီ..တမ်းတမျှော်ရည်… တကယ်လွမ်းသည်။မ (၈.။၂၅။၂၀၀၈)
ချစ်သူရယ်ရင်ထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားတယ်။မင်း ကိုယ့်ကို..ဘယ်လောက်ချစ်တယ်။ချစ်သူရယ်ရင်ထဲမှာ သိမ်းဆည်းပါ။ကိုယ် ဘယ်လောက်ချစ်တာ။ကဗျာဆန်တဲ့သူကိုကဗျာသံဖွဲ့ ယူပြောချင်တယ်..ကိုယ်အချစ်သက်သေ.ကာရံများ..ပျောက်ကွယ်...မင်းအကြည့်ရဲ့ အောက်မှာတွေဝေ ခဲ့ပြီ..သိနေတာ…ဒီ..တခုထည်းကျန်တယ်။ဘုရားစူး ချစ်တယ်။တွယ်ရာမဲ့ကိုယ်ကိုကြင်နာဖွဲ့ သူ..ပြောချင်တယ်..ကိုယ့်အချစ်မျက်ရည်.သံစဉ်များ..ပျောက်ကွယ်...မင်းစကားရဲ့ အောက်မှာကိုယ် ကြွေခဲ့ပြီ..ပြောစရာ…ဒီ..တခုထည်းကျန်တယ်။ဘုရားစူး ချစ်တယ်။မ (၈။၂၅။ ၂၀၀၈) Posted by
ဒီနေ့မနက်..အာရုဏ်ဦးအထ..မနေ့ ညကလိုမဟုတ်ဖူး..ချစ်သူရဲ့ လက်မောင်းတွေကြားကကိုယ်..ရှက်သွေးပိုမိတယ်။နေရာတိုင်းမှာ..မင်း ရဲ့ မျက်နှာ..လေပြေကြားက..မင်းရနံ့ တဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေတဲ့ နှလုံးသွေးကြောများနဲ့..အချစ်ရယ်.. မင်းကို ကိုယ်သိပ်ချစ်တယ်။စောင့်ခဲ့ ရတဲ့ ရက်ပေါင်းများစွာ။တွေ့ ရတာ ခဏတာ..ဒီတခါ ပြန်ခွဲ..ဘယ်တော့ နောက်တစ်ခေါက်ပါလည်း။လဲမှို့ကလေးလို ကပ်..မင်းအရိပ်လို အနောက်မှာရပ်..လိုက်ပါရစေ။..ခေါ်သွားမလား..ချန်မထားနဲ့ သေချာတာက သိတယ်..အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခု..စောင့်ရဦးမှာ..ပြန်တွေ့ ကြဖို့ အရာ။သေချာတာတော့ ပြောပြမယ်..နှလုံးသား တချက်ခုန်တိုင်း..ရင်မှာ မုန်တိုင်း..လွမ်းနေမှာ..အကြိမ် အခါခါ.အချစ်ရယ် .ယုံကြည်ပါ။.ရေရာတာတော့ ပြောပြမယ်.အသက် တစ်ချက်ရှူလိုက်တိုင်း..ရင်မှာ ဒုန်းစိုင်း..တွေးမိနေမှာ..အကြိမ် အခါခါ..အချစ်ရယ် .ယုံကြည်ပါ။.မ (၈။၂၄။၂၀၀၈)
အချစ်ဆိုတာ..ပျားရည်တစ်စက်နှင်းဆီပန်းတစ်ခက်ကိတ်မုန့် လေး တစ်ရှက်ပန်းသီး တစ်လုံးမြိန်ရှက်စွာ စားသုံးမသေမချင်း ..တစ်ဘဝလုံး။သံယောဇဉ်တွေကို..စုစည်းသွန်းလောင်းနားလည်မှု တုတစ်ချောင်းစာနာမှု ဆောက်တချောင်းစေတနာလက်ချောင်းများ.နဲ့ ထုဆစ်..အချစ်ပန်းပုတစ်ခု အဖြစ်နှစ်များစွာ ခိုင်စေ..တူချစ်သမျှ..သက်သေပြနိုင်စေ။အချစ်နဲ့ စီးဝင်ပြောင်းလဲ..အတ္တကို အရေခွံလဲ..မာန တွေ ပျောက်ကွယ်ဆဲမနေ့ ကငါနဲ့ဒီနေ့ ငါ..မတူညီပါ။အချစ် နတ်ရေစင်အောက်.အသစ်တဖန်..အစို့ ပေါက်ခဲ့.ချစ်ခြင်းရဲ့ မျက်လှည့်အတတ်ငါ အသက်ရှူ ရပ်ခဲ့ပြီ။ပြေးမထွက်သာဘဝ ရဲ့ ညှို့ ဝင်္ကပါ။မ (၈။၂၄။၂၀၀၈)
အဖော်မဲ့ ကိုယ်..ကဗျာတွေသီ ရေးလမင်းဆီ မျှော်ငေး....တမ်းတမ်းတတ အလွမ်းမပြေ..ဖေါ်ကွဲညပေါင်း..တစ်ကဋ္ဋေသရော်နေတဲ့ ဖိုးလမင်း..တိမ်ကြားက ခိုးကြည့်ရင်း..အလွမ်းနဲ့ သွေးပျက်..မှေးစက်မရတဲ့သူဆီ..ပြုံးယောင်ပြု လထီးဆောင်းခဲ့ပြီ။သူလည်းလေ လွမ်း..ကျမလည်းလေ လွမ်းကြားလေပြေ ဆော်ရမ်းအေးဆောင်း ညချမ်းများစွာ..ရင်ခွင်ပျောက်ရှာ..သူချမ်းနေမှာဘဲ..ကြင်သူထပ်.မရှာ..သူ သစ္စာမြဲမြံ့မှာပါဘဲ..ခါခါ ဆုတောင်းခဲ့..ရေမရ..ဖေါ်ကွဲသမျှ..အလွမ်းညတွေ...လတစ္ဆေ။မ (၈။၂၄။၂၀၀၈)
အချစ်ကိုရူးမိုက်စွာကိုးကွယ်ဖူးပေမဲ့တံခါးမခေါက်ရောက်လာတဲ့ အမုန်းအဆုံးက..အရှုံး..သန်းခေါင်ညများထဲ..ပျောက်နေတဲ့ အလင်း.စစ်မှန်တဲ့ ချစ်ခြင်း..နားလည်မှု နဲ့ ပွင့်လင်းလူသားတွေ များတဲ့လောက..တယောက်တလေလေးမှ..မရှိကြတော့ဘူးလား.တမ်းတခြင်းများနဲ့အနာဂတ်ပန်းချီ..အမဲရောင် ပိန်းပိတ်မှောင်လွန်းသည်။ယဲ့ မျှင်အလင်းတန်း..မင်းဝင်လာတဲ့လမ်း..စမ်းတွေ လည်းပေါက်..ပန်းရေသောက်..ဘဝသစ်တဖန်..အချစ်နဲ့ရှင်သန်။အချစ်ဆိုတဲ့အရာ..တားဆီးမရ..လေလို..ထိုးဖေါက်ဖြတ်ကျော်စေရေလို..ဖြတ် မပြတ်နိူင်အောင်သူ့ သဘော သူဆောင်..မျော်လင့်ချက်.လင်းလက်အရောင်..ဘဝ အမှောင်တွေထဲ။အော်..ကိုယ်ချစ်တာ..မင်းမှ မင်းပါဘဲ။မ (၈။၂၄။၂၀၀၈)
အာဒမ် ဧဝ..ကျမနဲ့ ပန်းသီး..
နိုးတ၀က်ညက အိပ်ပျက်လရောင်ရင်ခွင်ကြား အိပ်စက်..ဘယ်မလည်း..အချစ်ရဲ့ နွေးတွေးလက်တွေ..အေးစက်တဲ့ဆောင်းလေ.ညှင်းရက် ကလူ..ရင်ခွင်ပျောက်သူ..လွမ်းတမပြေ။အကြိမ်ကြိမ်.လွမ်းတမ်းတရင်နှင့်အမျှမကျက်တဲ့ ဒဏ်ရာ..အကွာအဝေး က.ငရဲပမာ..ဧ၀ လိုသာ မိုက်ရဲ..အေဒင်မှာ..မင်းလေ..အာဒမ်လို ရှိရင်..အဆိပ်ပန်းသီး..ဘယ်လောက်ခါးသီးသီးကိုယ်လေ မြီးပါ့မယ်။မင်းကို…ချစ်တယ်။မ (၈။၂၄။၂၀၀၈)
နှလုံးသား ရင်ခုန်သံရိုးသားစွာ ဘာသာပြန်ကြည့်တဲ့အခါ..ရလာဒ် ကရုပ်လုံးကြွခဲ့တယ်..မင်းကို ဘယ်လောက်ချစ်တာ.ရင်တွင်းည တစ်ထောင့်တစ်ည အိပ်မက်ထဲမင်းဘဲ နှောက်ယှက်စိုးမိုးဆဲဖြစ်ပျက် ပေါင်းစည်းမှူရဲ့ သီအိုရီ..မင်းကိုဘဲ အဖြေထွက်သည်။အမုန်းနဲ့နာကျည်းမှုတွေ အပြီးပိုင်နှုတ်ဆက်အချစ်ကိုသာ ပြန်လက်ခံပေါင်းစည်းခဲ့..ကွဲခဲ့တဲ့ အသဲတွေ က လှောင်ရယ်မလား..ကျတဲ့ မျက်ရည်တွေ က ကျီစယ်မလား..အမှတ်သည်းခြေမရှိ.တဖန် ပြန်ချစ်မိပြန်ပြီလား..အိပ်မက်ဆိုးတွေကို ဆုတ်ဖြဲ..မင်း အချစ်နဲ့ စိမ်ခေါ်ရဲတဲ့အခါ.မနေ့ က..ဒဏ်ရာဟောင်းများ..သွေးသစ်လောင်းခဲ့ပြီ..လေဆန်ပျံရန် တောင်ပံ့ဝင့်ဘဝသစ်သို့ မျှော်လင့်ကိုယ်လေ..မင်းအတွက်.အဆင်သင့်။မ (၈။၂၄။၂၀၀၈) Posted by
မမျှော်လင့်သော မျှော်လင့်ခြင်း..ရင်ကိုချင်းနင်းတဲ့ မင်း။
အကောင်းဆုံးတွေ..မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့မကောင်းဆုံးတွေ..ရရှိခဲ့ဘဝဆိုတာ..ဒဏ်ရာ ဗလပွနဲ့ မွန်မြတ်ဆုံးစေတနာထားပေမဲ့မမွန်မြတ်သော သူများတွေရဲ့ဘဝကြောင့် အဆိပ်သင့်တယ်။ဖြစ်သမျှ ရောင့်ရဲ..နေလာရဲတဲ့ ခဏ.တန်ဖိုးဖြတ် မရ..မင်းမေတ္တာ ကြောင့်..ခုလေ..နေရောင်ထဲ..ကိုယ် ရဲရဲ ရပ်ရဲပြီ။ဘဝတခုလုံး..အလိုအပ်ဆုံးသော..အကောင်းဆုံးသော အရာ..စစ်မှန်တဲ့ အချစ်ဟာ..မင်းဆီမှာ ဘဲရှိတယ်။..မမျှော်လင့်သော မျှော်လင့်ခြင်း..မင်းနဲ့တသက်တာ ကိုယ် ရင်းနှီးပါရစေ။မ (၈။၂၄။ ၂၀၀၈)
ဝမ်းနည်းမိတယ်။နွမ်းရိကြေမွခဲ့တဲ့ ဘဝမှာ..မင်းအတွက်ပေးဖို့ ရာ..ငါ့မှာ..ကောင်းမွန်တဲ့အရာ..သိပ်မကျန်တော့ပါဘူး.တမ်းတမိတယ်.မွတ်သိပ်တမ်းတခဲ့တယ် ဘဝမှာအချစ်စစ်တဲ့ တွေ့ ဆုံဖို့ ရာ.ငါ့မှာ..မျှော်လင့်ချက်ဟာ..အမှန်က သေးငယ်တယ်။မမျှော်လင့်ဘဲဆုံမင်းနဲ့အကြုံမှာ..အချစ်တို့ပန်းငုံ..ပုရစ်ဖူးသို့ ပြည့်စုံသိပ်ချစ်မိတယ်။မင်းယုံချင်မှ ယုံမယ်.။အပြောရခက်ဝေဒနာ..တစ်နေ့ ထက်တစ်နေ့ မွန်းကျပ်စွာ။မတန်မှန်းသိတယ်။အချူရခက် စေတနာမဝံ့မရဲနဲ့မေတ္တာ.။ငါ့မှာ..လွန်ဆွဲနေ..လိုချင်တာနဲ့ဖြစ်သင့်တဲ့အရာ။အားနာမိတယ်အဆိုးအပြည့်နဲ့ ဘဝမှာ..မင်းအတွက် လက်ဆောင်..ငါ့မှာ..အချစ်တစ်ခုဘဲ ရှိတယ်.။လိုချင်လည်း ယူ၊ မလိုချင်လည်း.ဗွေမယူမင်းနဲ့ သဘောတူ..ဘဝမှာ..အဆိုးဆုံးများတွေ..ရင်ဆိုင်ဖို့အသင့်လေ။မ (၈။၂၄။၂၀၀၈)
ရေအလျှင်ကြောမှာ..မျှောချခဲ့တယ်.. ပန်းကလေးတို့ ရေ.ပင်လယ်ရဲ့အဆုံးကို..ရွက်လွင့်ထွက်ခွါ..ချစ်သူဆီ..ကိုယ်လွမ်းသမျှ ပြောပေးပါ။ဝေဟင်ထက်မှာ..စေလွတ်ခဲ့တယ်.. ခိုဖြူလေးတွေရေမြေဆုံးတိုင်..ပျံသန်းအဝေးနှင်..ချစ်သူဆီ..ကိုယ်ချစ်သမျှ ပြောပေးပါ။ကိုယ်တစ်ယောက်ထည်းလေ..သောင်ပြင်ထက်ဆီ..မိုးစက်ဝိုင်းပန်းချီ..သက်တန့် ရဲ့အောက်ဆီ..နေမထိလွမ်းတယ်..မိုးသားနဲ့ကောင်းကင်..တောင်ပံရှိရင်..ဘယ်လောက်ဝေးဝေး အပြေးနှင်ချစ်သူဆီ လာခဲ့မယ်.။မ (၈။၂၄။၂၀၀၈)
မိုးတွေ ရွာပြန်ပြီ.ဝေဟင်ပေါ် က.တိမ်စိုင်တွေ ငိုကျ..လွမ်းစရာ့ မိုးပန်းချီ..ကြင်သူရယ်…မင်းကိုလွမ်းသည်။ကိုယ့် အားနည်းချက်ဘဲ ဆိုချင်လည်းဆိုကိုယ့် ပျော့ညံ့ချက်ဘဲ ဆိုချင်လည်းဆိုမင်းရဲ့ " ချစ်တယ် " ဆိုတဲ့စကားမှာ.ကြည်နူး ပျော်ရွှင်..ဘဝကို..မင်းရင်ခွင်ထဲ..အရည်ပျော်ချင်.ယုံကြည်ရင်း..အသက်ရှင်.ရုးမိုက်တယ်ဘဲ ထင်ထင်ဖြစ်နိုင်တယ်..မဖြစ်နိူင်တယ်.ဖြစ်သင့် တယ်..မဖြစ်သင့် တယ်.စဉ်းစားရမဲ့ ဦးဏှောက်များသေဆုံးမျက်ကန်းတဲ့ ချစ်တစ္ဆေဖြစ်တူညီအချစ်..ပြန်ချစ်မိခဲ့မရဲတရဲ တုန့် ပြန်မှု“ I Love you too”မိုးတွေက အပြင်ဖက်..ရွာချနေဆဲ.ပြူတင်းပေါက်ရဲ့ မှန်ချပ်..တဖြတ်ဖြတ်ရိုက်ခတ်ဆဲအေးစက်တုန်ရင်ဆဲ..လက်များ..နွေးထွေးတဲ့ နှလုံးသားနဲ့ မင်းရဲ့ အလာ..ကိုယ်လေ မျှော်နေဆဲ.တယောက်ထဲ ..မိုးသဲရက်များစွာ..ရင်တွင်း….မုန်တိုင်းသည်းထန်စွာမ (၈။၂၂။၂၀၀၈)
ကိုယ့်ရင်ထဲက သံယောဇဉ်ကိုမြင်သာအောင် မဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့သူမြင်တတ်တာ..ထူးဆန်းတယ်ကိုယ့်ဘယ်လောက်ချစ်တာ..စကားနဲ့ မဆိုပြခဲ့ပေမဲ့သူနားလည်တတ်တာ..ထူးဆန်းတယ်သူ့ ရင်ထဲက အကြင်နာကိုမရိပ်မိအောင် မျိုသိပ်ထားပေမဲ့ကိုယ်.ဘာသာပြန်တတ်တာ..ထူးဆန်းတယ်သူ့ သစ္စာကိုလက်တွေ့ သက်သေမပြရသေးပေမဲ့ကိုယ်.အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်တာ..ထူးဆန်းတယ်နှစ်ဦးသားရင်ထဲက အချစ်စကားတွေကိုလက်ဖျားသီ.အလင်္ကာမရှိဘူး.နှုတ်ဖျားစီ ကဗျာမရှိဘူးတိုးတိုးတိတ်တိတ်..ကျိတ်မျက်လုံးချင်း..အကြည့်ရိပ်ရိပ်ရင်၌ တသိမ့်သိမ့်မျိုသိပ်ခံစား ကြည်နူးနေတတ်တာထူးဆန်းပါသလား..မထူးဆန်းတဲ့ သာမန်အချစ်..နားလည်မှုတို့ နှင့်..ထူးဆန်းစွာ..ချစ်မိသည်။အလေးအနက် တန်ဖိုးအမြတ်တနိုး ရည်ရွယ်ထားမိသည်။တနေ့ နေ့ ဒို့ နီးကြမည်။မ (၈။၂၂။၂၀၀၈) Posted by
SummaryRest of your post
"မိုးကုတ် စက်ဝိုင်းကြီးအောက်မှာ…ဒို့ တွေတစ်နေ့ "
မိုးရနံ့ သယ် တိမ်စိုင်စုက..တောင်တွေကို ပွတ်တိုက်တဲ့ အခါ.မိုးအဖြစ် ရွာကျ တာပါဘဲ။နှင်းမှုန်ဖွေးတွေပေါ်..နေခြည်ဆမ်းတဲ့ အချိန်..အရည်ပျော် ကျ တာပါဘဲ။ခြောက်ယော်သစ်ရွက်တွေ..လေပြေတိုးတဲ့ အချိန်မြေပေါ်ကြွေကျ တာပါဘဲ။သဘာဝဟာ..သဘာဝဘဲ..တားဆီးမရ..ဖျက်ဆီးမရတာ..ချစ်သူ နှစ်ဦးရဲ့ စစ်မှန်မေတ္တာ..ရွှေပင်လယ်ခြားလည်း..မဝေးသာ..ဂုဏ်တံတိုင်းများလည်း..မဆီးသာအဆင့်အတန်းကွဲကွဲ..အသက်ဘဲ ကြီးကြီး..မာနဘဲကြီးကြီး..အချစ်ဆိုတဲ့အရာက တန်းညှိ..ဘဝဆိုတာ..တူညီမှုအတိအတ္တဆိုတာ..ဘယ်မရှိ..ချစ်သူအတွက်..ပျော်ဖို့ သက်သက်..ဘဝတောင် ပေးဆပ်ရဲတယ်။ကြီးကြီးငယ်ငယ်..အချစ်နဲ့ မူး..ရုးသွပ်တဲ့သာမယအချစ်အတွက်..ဘဝ တဖန်ပြန်စတယ်..ချစ်သူရယ်..ယုံမလား။မိုးကုတ် စက်ဝိုင်းကြီး ရဲ့အောက်မှာ…ပင်လယ်ဟာ..မိုးပြင်နဲ့ ထိနမ်းတာပါဘဲမြေပြင်ဟာ ကောင်းကင်ကို ပွေ့ ထားဆဲ.ဒို့ လည်းလေ အားမလျှော့နဲ့ ။မကြာတော့မဲ့ နေ့ တစ်.ရက်ရက်ကိုယ်ဟာလေ..မင်းအတွက်.မ (၈။၂၀။၂၀၀၈)
ဒီတစ်ည တော့ သည်းခံပါဦး။
တစ်ရက် တစ်ရက်..ပိုပို.နက်လာတာက..တိုင်းဆမဲ့အချစ်တစ်မိနစ် တစ်မိနစ် ..ပိုပို..တမ်းတမိတာကသူ့ ရဲ့နှစ်သက်မှုစက္ကန့် တန်တွေ..တချက်ချက်ပြေး..ပြက္ခဒိန်ရွက်တွေ.တရွက်တရွက်ဆွေး..တွေ့ ရေးခက်ခက်..ချစ်ရေး ခက်ခက်..လွမ်းလိုက် ရတာ..စားသောက်မရတာက ခက်ညည တွေလည်း.အိပ်ရေးပျက်။ကြမ္မာဆိုးလှ ဒီဘဝမှာကောင်းတာလေးပြစရာ..တစ်ခုဘဲရှိတယ်။ခိုင်မြဲမြံ့တာ..သူ့ သစ္စာမယိုင်လဲနိုင်တာ..ကိုယ့်မေတ္တာ။ဘယ်အချိန် ဘယ်လောက်ဝေးဝေးဇွဲဆုလေးတော့ မျှော်လင့်တယ်။အံခဲကြိတ်မှိတ်.အလွမ်းဝေဒနာတွေ ချော့သိပ်နေဆဲ..မနက်ဖြန် (သို့ မဟုတ်)နောက်….နောက်သော…မနက်ဖြန်များမှာ..တွေ့ ရမှာဘဲ။တစ်ယောက်ထည်း..ဒီ.တစ်ညလည်းအားတင်း ဖျစ်ညှစ်…အိပ်လှဲ့ ပါဦးအချစ်။တွေ့ ကြမဲ့ မနက်ဖြန် အတွက်..အားသစ်ရဖို့ ရာ။မမေ့ပါနဲ့ ..ဒီမှာ..ကိုယ်လည်းဘဲ လွမ်းနေတာပါ။မ(၈။၂၀။၂၀၀၈)
မျက်လုံးခြင်း ဆုံတဲ့ အခိုက်အတန့် ကိုယ်စိတ်တွေ..ဝေဟင်ထဲဆိုင်းကြိုးပြတ်.စွန်တစ်ကောင်လိုစီးမြောခဲ့ဒါ..ဘာကြောင့်ပါလဲ။နူးညံ့ သူ့ စကားသံ ကြားရတဲ့ အခိုက်အတန့် ကိုယ့်နှလုံးသွေးကြောထဲ..ရေနွေးအဆက်မပြတ် ပျော်ဝင်စီးဆင်းခဲ့ဒါ..ဘာကြောင့်ပါလဲ။ချိုလွင် သူ့ ရယ်သံ ကြားရတဲ့ အခိုက်အတန့် ကိုယ့်အားအင်ပြတ်..လည်ချောင်းခြောက် ရေငတ်မိရဲ့ဒါ..ဘာကြောင့်ပါလဲ။တိတ်တဆိတ် ကျေးဇူးပြုပြီးကျမ ရင်ခုန်သံတွေရယ် တိတ်ပေးကြပါပြင်းပြတဲ့ ရှိုက်ဝင်သက်စိတ်မလုံ..ကျမလေ..ရှက်..ရှက်..ရှက်သူ ရိပ်မိသွားပါ့မယ်။ပါးပြင်ပေါ်က ရှက်သွေးစို့ နှင်းဆ်ီရောင်ကျမအပေါ် ကျီစယ်မှာလားမောင်။ရေအလျှင်တားမရ..ချစ်ရေကာတာ ပြိုဆင်းနေဆဲ..မချစ်ရဲ..ချစ်ရဲနဲ့ ကျမ.နောက်ဆုံးကျ..ယုံစားချစ်လိုက်ပြီ။မိုက်သည်ပြောပြော..ဒီ မှော်ရုံတော..တစ်ကြောအချစ်နဲ့ လွင့်မြော..မောင့်အတွက်..ဇော..ပန်းမွေ့ ယာ၌ ပျော်မွေ့ သော..ချစ်သူနဲ့ ချစ်ရမဲ့..မနက်ခင်း..တစ်မနက်ချစ်သူနဲ့ ကိုနမ်းရမဲ့..ရက်ကလေးတစ်ရက်လဲခဲ့လိုက်ပြီ..နောင် ပေးဆပ်ရမည့်..လွမ်းရက်ပေါင်းက ခုနှစ်ရာ။မ (၈။၂၀။.၂၀၀၈)မောင်မပါ..ခရီးသွားရတာ..လွမ်းလိုက်တာမောင်ရယ်။ နောင်အတူတူ လိုက်ခဲ့ပါနော်။
ကော်ဖီမဲ့ မနက်..အချစ်မဲ့ သက်ခါးခါး
မနက်ခင်း..ကော်ဖီ.မသောက်ရ..စိတ်မကြည်..ရင်မှာ..ဟာတာတာခေါင်းမူးကိုက်.စွဲလမ်းခဲ့တဲ့..ဘဝမှာသူ့ မျက်လုံးကြည်..အပြစ်ကင်းတဲ့ရယ်သံများသည်မကြားရ..လွမ်းမိပြီ။ရင်မှာ..မဖြေသာ.လောင်ကျွမ်းမြိုက်စွဲလမ်းခဲ့တာ..ပြောမပြသာတိမ်ပြာတွေရဲ့ အဝေးသောင်ကမ်းဘေးမှာ သူရှိနေမှာ။ပင်လယ်ပြင်ဘက်ငေး..ကိုယ့်ကို သတ်ိရနေမယ် အသေချာ။စွဲလမ်းမိသူ. နှစ်ယောက်သား.ရေမြေဝေး တဲ့ တဒင်္ဂကော်ဖီ မရှိတဲ့ မနက်ခင်းရက်များကနေမထိ ထိုင်မသာ..နှစ်ဦးသားလွမ်းလိုက်တာ။ဆို့ ကြင်နစ်နစ်...တကဲ့ ဝေဒနာစစ်မ (၈။၂၀။၂၀၀၈)
လေယာဉ်ကြီးအတက်..အကြည့်..တစ်ချက်ပြူတင်းပေါက်ကနေ..အပြင်ဖက်မြင်လွှာတွေ..မှုန်မွှားမျက်ရည်များလား..နှင်းစက်များလား..ဝေဝါးနေတယ်။တွေ့ ရတဲ့ တိုတောင်းကာလ..ပျော်ရွှင်ဆုံးညတွေ..သီချင်းလေးတွေနဲ့ .ကြည်နူးစွာ.သူ့ ရင်ခွင်ထဲအိပ်စက်ပြန်တွေးမိရုံလေး တောင်ရင် မုန်တိုင်းထန်.သူနဲ့ နေရတဲ့ ရက်နိဗ္ဗာန်။ခုချိန်လေးတူတူမနေနိူင်သေးတဲ့..အခိုက်အတန့် ..လွမ်းတာတွေ..စု..ကျမျက်ရည်ဥရင်ဝေဒနာက ခိုးလိုးခုလု.မကွဲကွာသော ခွဲခွါရခြင်း..ခါးသီးစွာ ရင်ဆိုင်ရင်းတနေ့ တချိန်ချိန်..အတူတူနေ.လွမ်းချိန်တွေ..အကြွေးဆပ်..မောင့်ရင်ခွင်မှာတိုးတိတ်တိတ်.မျက်နှာအပ်။ရင်တွင်းရဲ့ ထာဝရချဉ်ခြင်းအာသာတစ်ရပ်ဘဝရဲ့..နောက်ဆုံးရက်များ..နိဗ္ဗါန်ရည်ရွယ်.ကုသိုလ်တွေ..မင်းနဲ့ တူတူ..ဝေယူချင်တယ်။မ (၈။၂၀။၂၀၀၈)
ကမ်းသောင်ကို တက်မဲ့ပင်လယ်ဒီရေ..တွေ..လမင်းကို.စောင့်မျှော်နေသလိုလွင့်မြောလိုတဲ့ပန်းဝတ်မှုန်တွေက..လေပြေတွေကို စောင့်မျှော်နေသလိုသက်တန့် ဖြစ်မဲ့မိုးရေမှုန်တွေကတဲ့ နေခြည်နုကို စောင့်မျှော်နေသလိုကိုယ်လည်းလေမင်းကို အချိန်တိုင်း … စက္ကန့် တိုင်း တွေ့ချင်နေတယ်။လမင်းကြီးလို..လကွယ်ရက်များ..မှောင်ချမထားပါနဲ့ လေပွေတွေလို ဝေ့လည်တိုက်..မလှည်ုစားလိုက်ပါနဲ့ နေခြည်တွေလို. တိမ်မဲညိုတွေကြား မပုန်းလိုက်ပါနဲ့ တွေ့ ချင်နေတဲ့ ချစ်သူကို..မျက်နှာညို.စိတ်မကောက်လိုက်ပါနဲ့ ။နူးညံ့တဲ့ အပြုံးများ..အမောပြေ ခြွေချထားလှည့်ပါခဲ့။ပေးနေကြ အနမ်းများ..အလွမ်းပြေ ပေးသနားလှည့်ပါခဲ့။တဘ၀စာအတွက်..မင်းနဲ့ အသက်ဆက်ပါရစေ။မ (၈။၂၀။၂၀၀၈)
ည..ကလေးတစ်ည.တိုက်ခတ်လေတွေထဲက..ဆောင်ယူ သယ်လာခဲ့ညမွှေးပန်းများရဲ့ ပန်းလေပြေ..ချစ်သူရဲ့.ကိုယ်သင်းရနံ့ ..ကိုဘယ်မမီ..စန္ဒယားခလုတ်များရဲ့ သံစဉ်ဟာချစ်သူ့ရင်ခုန်သံလောက်.မချိုနိူင်ပါဘူးပိုးကတ္တီပါစ ရဲ့ ပွတ်တိုက်ညင်သာမှုချစ်သူရဲ့နှုတ်ခမ်း တွေ့ ထိမှု လောက်..မနူးညံ့ပါဘူး။နှင်းဆီပွင့်ချပ် ပန်းမွေ့ ယာရဲ့ လန်းဆတ်မှုချစ်သူ ရင်ခွင်ကြားလောက် စိတ်ကြည်နူးမှုမရှိနိုင်ပါဘူး.အာရုဏ်နေခြည်ရဲ့.ထွေးပွေ့ မှုချစ်သူ.အပြုံးများလောက်.. နွေးထွေးရှိနိုင်ပါဘူး။ပျားရည်သကာရဲ့ အရသာချစ်သူရဲ့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားသံလောက် ချိုမြမှု မရှိနိုင်ပါဘူး။ချစ်သူ နဲ့ ပတ်သက်ရင်..အရာရာဟာ..ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဘဝဆေးရောင်စုံတောက်ပ. ပန်းချီတစ်ချပ်ကြင်နာမှုပန်းပုဘောင်..အနားသတ်နဲ့ မျှော်လင့်ချက် နေခြည်အောက်မှာလန်းဆတ်လှပနေမြဲဟန်ဆောင်မာယာ တွေ မဆိုတတ်ပါဖူးရိုးရိုးလေးနဲ့ ဘဲ ပြောချင်တယ်.တိုးတိုးလေးနဲ့ ဘဲ ပြောချင်တယ်...သိပ်ချစ်တယ်။မ (၈။၂၀။ ၂၀၀၈)
တကူးကူးနဲ့ သစ်ပင်ပေါ်က ချွဲတဲ့ ချိုးဌက်..ရင်မှာ..လွမ်းသက်သက်မမေ့သူလည်းလေ..အဖေါ်ကွဲကိုယ့်လို…ဘဲဆွေးမြေ့။ချစ်သူအသံကြားတိုင်း..ရင်ခုန်သံ ဒုန်းစိုင်း.ပြေးချင်တဲ့ မြင်းရိုင်းလိုစိတ်..ချစ်သူရင်ခွင်ထဲ.လှဲပစ်လိုက်ချင်တယ်..နေကြာပန်းလို..နေရောင်အနောက်လိုက်..ပုစဉ်းရင်ကွဲလို..ရင်ကွဲအောင်.အော်ငိုချင်ခိုက်..ချစ်သူလည်း ကိုယ့်လိုလွမ်းလျှနေမှာ..ယုံကြည်တယ်..မောင်ရယ်..လွမ်းဝေဒနာ..အနေရခက်လွန်းတယ်..တနေ့ နဲ့တနေ့ ..ပိုပို..တွေ့ ချင်တဲ့ဝေဒနာ..ဆို့ နင်ကြေကွဲ အနေရခက်စွာ..ဝေးနေတဲ့ရက်တွေ..ရေတွက်ကာမှတ်..ပြက္ခဒိန်ရက်များ ကြက်ခြေခတ်.ရုပ်သေးရုပ် ကြိုးပြတ်...ရင်မှာ..ဟာတာတာ ကွက်လပ်အချစ် မရှိတာ..ရေငတ် နေသလိုဘဲ..နေမထိ ထိုင်မသာ..နွမ်းလျှရင်မှာ…စိုးနှောင့်မချိ ..ဗျာပါဒါမ (၈။၁၈။၂၀၀၈)
ချစ်သူသာ ပါခဲ့ရင်..ဘယ်နေရာသွားသွား..လုံခြုံရဲရင့်.သူဟာလေ..ကိုယ်ရံတော် မင်းသားလေး.ကိုယ်ဟာလေ. သူချစ်တဲ့ပုံပြင်ထဲကမင်းသမီးလေး..စိတ်အားငယ်..စိုးရိမ်ကြောင့်ကျ.ချစ်သူရင်ခွင်သာ.နားခိုရိပ်မြုံ..သူ့ ဖျစ်ညှစ်ဆုတ်ကိုင်တဲ့ လက်..အားတက်ယုံကြည်.ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ရင်ဆိုင်ရဲသည်။ဖြတ်ကြမဲ့ မီးပင်လယ်..အားငယ်စိုးနှောင့်..မင်းမကြောက်နဲ့ ..ကျမနဲ့အတူတူ.သေလည်းတူတူ..ရှင်တူတူပေါ့..နှစ်ကိုယ်တူ ကြည်ဖြုလျှောက်မဲ့လမ်း။ဘယ်လောက်ဘဲ ကြမ်းစေပစမ်း..တွဲလက်တွယ်ယှက်..ဒို့ ထာဝရ..မပျက်.လှမ်းကြမယ်..တဘ၀အတွက်။နေခြည်လင်းမဲ့ မနက်ဖြန်များ..ဒို့ ကို ခစားကြတော့မယ်။..မ (၈။၁၈။၂၀၀၈) Posted by
မောင်..နွေလေပြေရူးငင်..ပြူတင်းပေါက်အပြင်ကလေခြူသံ ဆည်းလည်း..တင်..တင်..မြည်..ရိုက်ခတ်နေဆဲ..မောင်ရင်ခုန်သံဘဲ ထင်မိတယ်။ပိုတယ်..ပြောမယ်လား..မောင့်အိမ် တံစက်မြိတ်က..လေထန် တိုက်ချိန်..လေခြူဆည်းလည်းသံကြား..မောင်လည်း ကျမကို လွမ်းနေမှာလား..ညပုရစ်အော်သံ..ယော်ရွက်ခြောက်လေပေါ်ဝဲ ကြွေနေဆဲနေ့ များ..တနေ့ ပြီးတနေ့ ကွယ်ပျောက်..မောင်..ရောက်မဲ့နေ့ တွေ နီးမလား.ကံကြမ္မာကျည်ဆန်များ ကို..သစ္စာဒိုင်းနဲ့ ကာ..ဆုတောင်းနေဆဲ..တစ်နေ့ နီးဖို့ ရာ။ဆံနွယ်တွေ..လေပြေအတိုး.ရင်ခုန်သံ မတိုးတတိုး..လွမ်းမိတဲ့ ရင်..မောင် ဘယ်နေ့ လာမှာလည်းဟင်။မ (၈။၁၇။၂၀၀၈) Posted by
ပြောင်းလဲခြင်း သာ..မပြောင်းလဲတဲ့ ပြောင်းလဲမှု..အိုမင်းရွတ်တွ..ဇရာအချိန်ကျမောင့် အချစ်ရော..ပြောင်းလဲလေမလားအရင်လိုဘဲ..ချစ်ပါ့မလား မောင်။.သေတပန် တသက်..ရိုးမြေကျ ပေါင်းဖက်..ရှေးရိုးကျတယ်..ပြောပြော..ကျမတော့ စွဲမြဲချစ်တတ်တဲ့သူ..အပြောင်းအလဲ မုန်းတီးတဲ့သူမယုံကြည်လို့ မဟုတ်ဘူး..မပြောင်းလဲမဲ့..မောင့် အချစ်.ပြောင်းလဲခဲ့ လည်းအစဉ်ချစ်..တဘဝတာ.ရင်တနင့်နင့်..မျှော်လင့်ပြီးဘဲချစ်ပါရစေ။ကိန္နရာတွေ လို ချောင်းခြားတဲ့မျက်ရည်..အောက်ချင်းဌက်တို့အဖေါ်ကွဲရုံနဲ့ သေ.အချစ်စစ်၏ သက်သေ..မပြောင်းလဲခြင်းသာ..မပြောင်းလဲမဲ့ ပရမတ် တရား..ကျမရဲ့ သစ္စာစကားမှာ..မောင်ရယ်.. အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ပါ။မ (၈။၁၇။၂၀၀၈) Posted by
ချိပ်ပိတ် အခန်းတံခါးများရဲ့ အဖွင့်
ချိပ်ပိတ်ထားခဲ့ တံခါးတစ်ချပ်..ကြောက်ရွံ့မုန်းတီးခဲ့တဲ့ အချစ်တစ်ရပ်..သူ နဲ့ အတွေ့ မှာ နိဂုံးသတ်ခဲ့တယ်..ညအမှောင်..လမရှိည..တာရာကြယ်..ကြွေခ..သန်းခေါင်ယံ အလွမ်းမျက်ရည်စတဖန် ပြန်နိုးထ..အာရုဏ်ဦး.နေခြည်..ကန့် လန်ကာ..အမ.နေ့ သစ်သို့ပြန်စပြီလန်းဆတ်တဲ့ ဘ၀တစ်ခုဆီ။ထူးဆန်းသည်..ထင်မလား..မချစ် မနှစ်သက်သူနဲ့ ညပေါင်း ကဋ္ဋေ.ကိုယ်လေ..ခြောက်သွေ့ တဲ့ ပန်းတစ်ပွင့်နေလောင် ညှိုးညစ်။ချစ်ခင်သူနဲ့ မိနစ်ပေါင်းတစ်ထောင်..ကိုယ်လေ..စီးဆင်းနေတဲ့ရှင်သန်မြစ်..ဘဝဟာ အချစ်အတွက်..အသစ်ပြန်ဖြစ်။လွတ်လပ်တဲ့လေဆန်မဲ့ ဌက်ချိတ်ပိတ်ထားတဲ့ တံခါးရွက်..ပွင့်လေပြီလေ..သူ့ လက်ချက်..ကဲ..ဝင်လာခဲ့မလား..မောင်..မ (၈။၁၇။၂၀၀၈)
သူ ကပြောတယ်.ကိုယ်ချစ်လာအောင် သူ ဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးရိုးရိုးဘဲပြောမိတယ်... ချစ်တယ်.ဘာကြောင့် ကိုယ် ချစ်မိပါသလဲ..သူ့ ကို။ကိုယ် ကပြောတယ်.သူကို ကိုယ် မဆွဲဆောင်ခဲ့ပါဘူးရိုးရိုးဘဲပြသခဲ့..ကြင်နာတဲ့ အကြောင်းဘာကြောင့် သူ ချစ်မိပါသလဲ..ကိုယ့်ကို။ဘာကြောင့် ဒီလောက် ချိုနေပါသလဲ။သူ စကားပြောရင်..ဘာကြောင့် ဒီလောက် နူးညံ့ ပါသလဲ။ကိုယ် စကားပြောရင်.. ဘာကြောင့် သူ ဒီလောက် ဂရုစိုက်ပါသလဲ။ကိုယ့်ကိုတနေ့ မတွေ့ ရင်..ဘာကြောင့် ဒီလောက် စိတ်ပူရပါသလဲ။သူ နေမကောင်းရင်..ကိုယ်တို့အဝေးကြီးမှာ..ပုံမှန်မတွေ့ နိုင်ကြပါဖူး.နေအိုအို..ညိ်ုတဲ့အချိန်..ကောင်းကင်ပျံ ဌက်တွေ အိပ်တန်းတက်ချိန်နှစ်ယောက်စလုံးလွမ်းနေတယ်။ကိုယ်တို့တနေရာစီနေ..တွေ့ မဲ့ရက်တွေ ရေနေကြတယ်..ဒို့ နှစ်ယောက်သား..သိပ်ချစ်တယ်။မ (၈။၁၇။၂၀၀ဂ)
ကောင်းကင်အရောင် ပိန်းပိတ်မှောင်ကတ္တီပါည.. အနက်ရောင်ကြယ်မီးအိမ် မှိန်တစ်လင်းပြည့်ဝန်းပပ လမင်းချစ်သူ့ ရင်တွင်း..ကြယ်တွေကို မော့ကြည့်..ရေတွက်မိ.အချစ်ရှိသည့် ကမ္ဘာ..ပြည့်ဝကုံလုံ ဘဝလုံခြုံတယ်။ဆံနွယ်တွေ ညလေရိုင်းနှော့နောက်ပိုးချည်စသို့လွင့်လွင့်လူး.ကိုယ်သင်းရနံ့တစ်ရှိုက်စိတ်တွေ တိမ်တိုက်လိုဘဲ..မြေပြင်ပေါ် ပြုတ်ကျသွားခဲ့တယ်။အမှောင်ထဲ..မလင်းတလင်း.သူ့ မျက်ဝန်းရဲ့ အကြည့်.ရင်မှာ ဆူးဝင်ညိသလို..ဆားငန်ရေ.အဆက်မပြတ်ရင်ပူ ဆာလောင် ရေငတ်..ချုပ်တီးမဲ့ ဝိညာဉ်.လွင့်ပါးတဲ့..စိတ်အစဉ်..တိမ်မီးခိုးငွေ့ တောက်လျှောက်.ချစ်သူနောက် တကောက်ကောက်။သက်ပြင်းသံရှိုက်ရှိုက်.လခြည်ဇာ တိမ်ထဲဝင် အရောင်မိုက်.ပါးပြင်ပေါ်..ညင်သာ..သူနမ်း ခိုက်အချစ်ရယ်..သူ့ ရင်တွင်း..ကိုယ်အရည်ပျော်ဆင်းခဲ့ပြီ။တဒိတ်ဒိတ်သံစဉ် နဲ့ ထွေးသိပ်တဲ့ခဏတသက်တာမေ့မရ..တိမ်ပြာအောက်က လမင်းည။မ (၈။ ၁၇။၂၀၀၈)
စောင့်ကြည့်ချင်သေးတယ်... မနက်ဖြန်ရယ်...ဘာတွေဖြစ်.. ရင်ထဲမှာတော့ ကြေကွဲစွာ.. ကြည်နူးခဲ့ရတာ..မောင့်ရဲ့အချစ်.. အညတြပေမဲ့ ဂန္ဓ၀င် ချစ်ရတဲ့သူ.
Honey! I am Home.
အမှတ်တမဲ့မှ အမှတ်ထင်ထင်သို့ ။
တဖန်မွေးဖွားခဲ့တဲ့ အိမ်မက်.မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ အသက်...
အထီးကျန်နေတဲ့ အခိုက်အတန့် 
လှမ်းခေါ်ပါ။ မောင် လိုအပ်တဲ့ အချိန်
ချစ်သူများ၏ ဆုံတွေ့ ရာ ကမ္ဘာတစ်ခုဒီနေရာဟာ..ချစ်သူ နှစ်ဦးရဲ့ ဆုံနေကျနေရာအလွမ်းဒဏ်ရာတွေရဲ့ဒိုင်ယာရီ မှတ်တမ်းနေရာ..လူအတော်များများက.မသိကြပါဘူး.ကောင်မလေးက..လွမ်းတာတွေ ကဗျာရေးတယ်။ကောင်ကလေးက..ခံစားပြီး.ရုပ်ပုံဖော်တယ်။အမှတ်မထင်.လာရောက်ဖြစ်သူ..ခံစားကြည့်ပါ.. ဘယ်သူက ပိုချစ်တာ..ရေးချင်ရေးခဲ့ပါ။ ထင်မြင်တဲ့ အချက်..သူတို့ တတွေမှာ.ရှိတာက.မျှော်လင့်ချက်လေးတစ်ချက်တနေ့ တူတူ နေချင်ကြတယ်။ဘယ်တော့ ဘယ်အချိန်..ဘယ်နေရာ..နှစ်ဦးစလုံး မသိကြပါဘူး..ကံကောင်းထောက်မ နေနိုင်မယ်.မနေနိုင်မယ်..ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ကြပါဘူး..တကယ်လို့ ..ကဗျာလေးတွေဘဲ တွေ့ ပြီး.ပုံကလေးတွေ မဲ့နေရင်..ကောင်လေး ဒီလောကထဲက ပျောက်သွားတာပါ။ပုံလေးတွေဘဲတွေ့ ပြီး ကဗျာမဲ့နေရင်..ကောင်မလေး ဒီလောကထဲက ပျောက်သွားတာပါ။မျှော်လင့်ပါတယ်..မသေခင်..တူတူနေနိူင်ဖို့ ပါ။မသိနိူင်တဲ့ ကံကြမ္မာအတွက်..သူတို့ နှစ်ယောက်မှာခုခံဖို့ သစ္စာ လက်နက်ဘဲရှိပါတယ်။ချစ်တတ်သူများ အားလုံး..ဝိုင်းပြီးများ..ဆုများတောင်းပေးနိုင်မလား။ကောင်မလေးက..မျှော်နေပါတယ်။ကောင်လေးက..အလုပ်လုပ်ငွေစုနေပါတယ်။တနေ့ နေ့ မှာတော့..သူတို့ တတွေ နှစ်ယောက်….အပြာရောင် မိုးသားကြီးအောက်မှာ ?မောင်နဲ့ မ..(၉။၂၀။၂၀၀၈)
Passport လျှောက်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ် ဒီနှစ်ကုန်အားလပ်ရက်တွေမှာ လာဖြစ်အောင် စိတ်ထဲက ဆုံးဖြတ်ထားတယ် ။ အရောက်လာခဲ့ မယ် ။ ထွက်မပြေးဘူးဟုတ်မောင်*******************သေးမျှင်ပေမဲ့ခိုင်တဲ့ ကြိုးတွေ ရှိတယ်.. စိတ်ချနေ.စောင့်နေမယ်.. နှစ်တွေ ဘယ်လောက်ဘဲ ကြာကြာ...စိတ်မပျက်ဖူး.. ချစ်တယ်. ..တနေ့ နေ့ မှာ ဒို့ အတူတူပါ...သက်တန့် ကြီးအောက်မှာ...မ
မင်းမေးလိုက်တဲ့ မေးခွန်းလေးတချို့အတွက် စကားလုံးများနဲ့ ပြောဖို့ ခက်နေတယ် ရင်မှာဘယ်လို ချစ်သလဲ ဒါက်ုဘယ်လို ဖြေ မလဲ တို့သိပ်ခက်.......... နှလုံးသားထဲက မင်းအတွက် တို့ အချစ်တွေ သီချင်းလေးအဖြစ်နဲ့ဖွင့်ဟပြောချင်တယ် ယုံကြည်နိုင်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဆိုချင်တယ်အချစ်ကလေးရယ် တို့ ရဲ့အချစ်ကို မင်းသိအောင် စကားလုံးများရှိဘူး အိုသိပ်ခက်နေ ခံစားမိတဲ့သီချင်းလေးဆိုစကားလုံးများမရှိဘူး မင်းလေးသိအောင်ပြောဖို့ ခက် The following text will not be seen after you upload your website,
please keep it in order to retain your counter functionality A good life insurance policy will last to your end. simply by putting attention to website offerring insurance quotes the purchace process can be optimized. You can always borrow against your life insurance policy. counter